Soomaaliya: 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah iyo labo dhimasho ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya: 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah iyo labo dhimasho ah
April 25, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay Soomaaliya maanta, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay wasaaradda caafimaadka galabta oo Sabti ah.
Labo qof ayaa maanta u geeriyooday xanuunka, sida ay wasaaradda caafimaadka sheegtay.
Sida ku cad war-saxaafadeedka wasaaradda, tirada coronavirus ee Soomaaliya laga diiwaangeliyay ayaa gaartay 390 qof, halka dhimashadu ay kor ugu kacday 18 qof.
Soomaaliya oo kiiskeedii ugu horeeyay ee COVID-19 heshay 16-kii Maarso ayaa xanuunku si tar-tartiib ah ugu fidayaa dalka, oo nidaamkiisa caafimaad uu aad u liito.
Xanuunka ayaa sidoo kale saameyn dhaqaale oo balaaran ku yeeshay dalka oo ka soo kabanaya sannooyin bur-bur iyo colaado ah.
Khamiistii, wareysi uu wasiirka maaliyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle siiyay BBC Somali ayuu ku sheegay in khasaare dhaqaale oo dhan 40% uu sababay coronavirus.
April 24, 2020 Dowladda Soomaaliya oo dakhli ku dhow $200 milyan lumisay coronavirus dartiis